बच्चाहरूका लुगाहरू - तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने, तिनीहरू के बनाउनुपर्दछ र कहाँ किन्न सकिन्छ ताकि भाग्य खर्च नगर्नुहोस्? - Katalus.pl
निश्चित उमेरमा धेरै महिलाहरू आफ्नो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भूमिकाको लागि तयार हुन्छन् – आमा बन्नु। यस भूमिकालाई महिलाबाट धेरै गुणहरू आवश्यक पर्दछ जुन प्रसव पहिले देख्न सकिन्न। आमा धैर्य, हेरचाह गर्ने, जिम्मेवार, किफायती, विवेकी र अन्य धेरै हुनुपर्छ। तर यो हुनु भन्दा पहिले, गर्भवती आमाले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्दछ, बच्चाको जन्मको पोशाकको मुद्दा सहित। शुरुआती आमाहरूलाई प्रायः थाहा हुँदैन कि बच्चाहरूलाई के लगाईन्छ सामान्य टी-शर्ट वा प्यान्टको सट्टा, यी सामग्रीहरू कुन कपडाको हुनुपर्दछ र कहाँ खोज्नुपर्दछ।
बच्चाका लागि लुगाहरूको प्रकार
एक साधारण महिलाको लागि भन्दा सानो बच्चाको लागि ड्रेसिंग कोठा बढी फराकिलो हुन्छ। यसमा बच्चाहरूका सबै किसिमका कपडाहरू छन्, ती मध्ये केहीको चाखलाग्दो दृश्य र चाखलाग्दो नाम छ। तर तपाईं तिनीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
प्रायः जसो बच्चाले शरीरको लुगा लगाउँदछन्। यो शिशुका लागि यस्तो लुगा हो, जुन बिना कुनै बच्चाले गर्न सक्दैन। नाम अ English्ग्रेजीबाट आएको हो, शरीरको अर्थ शरीर हो, र यस प्रकारको बच्चाको कपडाले सम्पूर्ण शरीर ढाक्छ। शरीर क्रॉचमा जोडिएको छ, लामो वा छोटो आस्तीन हुन सक्छ। त्यहाँ कहिलेकाँही कोष्ठिकाको साथ शरीर हुन्छन्। कफतानिकी वार्डरोबको अर्को माथिल्लो भाग हो, जुन सबै भन्दा राम्रोसँग सम्बन्धित नभए पनि प्रायः उपयोगी हुन्छ खासगरी जाडोमा। यस्तो ज्याकेट सुरक्षित रूपमा बच्चाको छोटो बाहिरी शरीरमा राख्न सकिन्छ। पक्कै चिसो छैन।
बच्चाको वार्डरोबमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण लुगा भनेको जोकर हो। नाम एकदम पर्याप्त छ, किनकि कठपुतलीको आस्तीन र खुट्टाहरू भित्रका खुट्टाहरू छन्। प्राय: जसो यसले पजामाको रूपमा काम गर्दछ, यो लगाउन धेरै सहज छ, र एक नौसिखिया आमालाई पनि यस बच्चाको लुगा लगाउन धेरै समस्या हुँदैन। यद्यपि यो ध्यान दिन लायकको छ कि जोकर सम्पूर्ण लम्बाईमा अनजिप गरिएको छ, र टाउकोमा नराख्नु हुँदैन किनभने यस्तो जोकरलाई ड्रेसिंग गर्नु ठूलो विफलता हुन सक्छ। र्याम्पहरूले जोकरमा समान कार्य गर्दछ। यो नाम कहाँबाट आयो, कसैलाई थाहा छैन, तर यो शरीरको एक प्रकारको हो, चरणमा पनि जोडिएको छ, जसमा सर्टहरू थपिएको छ। यस संयोजनले र्याम्पर भन्ने कपडा सिर्जना गर्दछ, जुन तातो गर्मी दिन र रातहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ।
रोम्पर्स पोल्याण्डमा राम्ररी परिचित छन्, यद्यपि तिनीहरू पहिले नै बिर्सिसकेका छन्। अन्तर्निहित खुट्टाहरूका साथ प्यान्टहरू जुन बच्चाको काँधमा मात्र समाप्त हुन्छन्, प्राय जसो ब्रेसहरूसँग जोडिएको हुन्छ। यो बच्चा वा आमाले उनीहरूलाई लुगा लगाउँनका लागि धेरै सजिलो समाधान होईन।
शिशु ( केटाहरू र केटाहरू ) को लागी लुगाहरूको सूचीमा त्यहाँ शर्ट्स र स्लीपर प्यान्ट हुनुपर्दछ। कसरी सर्ट वा प्यान्टहरू देखिन्छन्, सबैलाई थाहा छ, तर आधा प्यान्टहरू के हुन्? सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यी बन्द खुट्टासहितको प्यान्टहरू हुन्। यो चाखलाग्दो समाधान हो जुन मोजाको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा हटाउँदछ।
बच्चाको लुगाका लागि सबै भन्दा राम्रो सामग्री
बच्चा लुगा सजिलो विषय छैन। धेरै प्रकारका चीजहरू सबै हुँदैनन्। महत्त्वपूर्ण, जब एक बच्चाको लागि उत्तम विकल्प छनौट गर्दा, यी सामग्रीहरू हुन् जुनबाट यी लुगा सिलाइन्थ्यो। एउटा सानो बच्चासँग अझै ठिक थर्मोरुलेसन हुँदैन, ऊ प्रायः पसीना बढ्छ, धेरै सार्दछ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि सामग्री हल्का, हावायुक्त र पूर्ण प्राकृतिक छ। थप रूपमा, सानो बच्चाको छाला अत्यन्त नाजुक हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षाात्मक अवरोध हुँदैन, त्यसैले कृत्रिम सामग्रीहरू विकल्प हुँदैनन्। दुर्भाग्यवश, यो सँधै मूल्यसँग मिल्दैन।
सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री जुनबाट बच्चाको कपडा सिलाईन्छ कपास हो। कपासबाट सिलाइएको बच्चाहरूका लागि लुगाहरू धेरै नरम, आरामदायक, रमाइलो र सुख्खा हुन्छन्। कपास एक यस्तो सामग्री हो जसले बच्चाको चाललाई प्रतिबन्ध गर्दैन, एक धेरै राम्रो विकल्प खाटको लागि कपासको पलंग पनि हो। कपासको अझै राम्रो विविधता छ – जैविक कपास, जुन पहिले नै धेरै महँगो छ। अर्गानिक कपास अन्यथा जैविक कपास हो, जुन कृत्रिम वा रासायनिक माध्यम बिना उगिन्छ।
लिनन लामो समयदेखि एक ज्ञात प्राकृतिक सामग्री भएको छ। यसबाट बनेका बच्चाहरूका लुगाहरू अविश्वसनीय रूपमा हावायुक्त हुन्छन्, जुन गर्मीमा मुख्य रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फ्ल्याक्स पनि अन्य सामग्रीहरूको तुलनामा जीवाणुरोधी गतिविधि र लामो स्थायित्वद्वारा विशेषता छ।
मुस्लिन अर्को सामग्री हो जुन बच्चाहरूको लागि कपडा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो कपास, ऊन र रेशमको बुनेको हुन्छ, र बुनाईको एक विशेष तरिकाको लागि धन्यवाद, यो पूर्णतया सास फेर्न सक्छ र यसले बच्चालाई बढी गरम हुन दिदैन।
बच्चाहरुको लुगा – किने कि?
बच्चाको कपडा वस्तुतः कहिँ पनि किन्न सकिन्छ – अनलाइन स्टोर, स्टेशनरी स्टोर, सुपरमार्केट वा बजार स्टोरबाट। सबै आमाहरूसँग सहज आर्थिक स्थिति हुँदैन जसले उनीहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूको लागि कपडामा ठूलो धनराशी खर्च गर्न अनुमति दिन्छ। जसको जीवन प्याम्पर्ड छैन, तिनीहरूका लागि उद्धार गर्न सकिने प्रत्येक zloty महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाँही, यसले तपाइँको बच्चालाई केहि राम्रो कपडा किन्नुहोस् जुन लामो समय सम्म रहनेछ, चोट पुर्‍याउँदैन, राम्रो देखिने छ, र बच्चा आरामदायी र हवाइलो बनाउनको लागि केही चीज राख्नु लायक छ।
Previous सार्वजनिक खरीद ऐन र राष्ट्रिय अपील कक्